The Untouchables (1987) – Burmese Subtitle
R 1987 119 min Crime, Drama, Thriller
IMDB: 7.9/10 253,800 votes
Andy García, Billy Drago, Brad Sullivan, Charles Martin Smith, Jack Kehoe, Kevin Costner, Patricia Clarkson, Richard Bradford, Robert De Niro, Sean Connery
ဒီဇာတ်ကားဟာ 1987 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကား။ မင်းသားတွေကတော့ ထိုခေတ်က နာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Kevin Costner တို့ Charles Martin Smith တို့ Andy García တို့ Robert De Niro တို့ နဲ့ Sean Connery တို့ ပဲဖြစ်တယ်။ Director ကတော့ Brian De Palma ပါ။
1930 ဝန်းကျင်ခန့် လောက်တွင် တရားမဝင်သော အရက်တွေကို ဖြန့် ချီခြင်း ရောင်းဝယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေတဲ့ သူဌေးကြီး Al Capone ကို သူတို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ အုပ်စုငယ်လေးတစ်စုက ရပ်တန့် တားမြစ်ပိတ်ပင်ဖို့ ကြိုးစားခြင်းပဲ။ တရားဥပဒေနဲ့ ညီမျှသော လုပ်ရပ်ကို လုပ်ခဲ့သော လူတစ်စု၊ သူတို့ ရဲ့ တစ်စနဲ့ တစ်စ အောင်မြင်မှုတွေကြောင့် သတင်းစာတွေကိ သူတို့ ကို “The Untouchables” များလို့ ကင်ပွန်းပေးကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ ရင်ဆိုင်ရသောသူသည် ငွေကြေးအင်အားရော လူအင်အားရော publicity အင်အားပါ ကြီးမားတောင့်တင်းတဲ့ ဒုစရိုက်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ခက်ခဲသည့်အတိုင်း အများစုသည် အသက်ပေးခဲ့ရသည်။ သူတို့ အဆုံးတွင် အရှုံးပေးရတော့မလိုပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်သူသည် အမြဲလိုလို အောင်မြင်သူပင် ဖြစ်သည့်အတိုင်း သူတို့ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ သူတို့ လူစုသည် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ သူရဲကောင်းများပင် ဖြစ်သည်။ သူတို့ လုပ်ရပ်ကို ကျွန်တော်လေးစားသည်။ သူတို့ ရဲ့ တစ်ခြားသူများနှင့် ကွဲထွက်ကာ အမှန်တရားဘက်က ရင်ဆိုင်သော သတ္တိကို လေးစားသည်။ ထို့ ကြောင့် သူတို့ သည်လည်း သူရဲကောင်းများလို့ ခေါ်ထိုက်ကြပေသည်။
အညွှန်းကိုတော့ Movies-we watch,we feel. Facebook Page မှကူးယူဖော်ပြထားပါတယ်။
Andy García Billy Drago Brad Sullivan Charles Martin Smith Jack Kehoe Kevin Costner Patricia Clarkson Richard Bradford Robert De Niro Sean Connery
Aditra Kohl Andy García Anthony Mockus Sr. Basil Reale Billy Drago Bob Martana Brad Sullivan Charles Keller Watson Charles Martin Smith Chelcie Ross Clem Caserta Clifton James Colleen Bade Del Close Don Harvey Eddie Minasian George S. Spataro Greg Noonan Jack Fitzstephens Jack Kehoe James Guthrie Jennifer Anglin Joe Greco John Barrowman John Bracci John J. Walsh Joseph Scianablo Kaitlin Montgomery Kevin Costner Kevin Michael Doyle Larry Brandenburg Larry Viverito Sr. Louie Lanciloti Matt Johnston Melody Rae Michael P. Byrne Mike Bacarella Pat Billingsley Patricia Clarkson Peter Aylward Richard Bradford Robert De Niro Robert Minkoff Robert Miranda Robert Swan Sam Smiley Sean Connery Sean Grennan Stephen Burrows Steven Goldstein Tim Gamble Valentino Cimo Vince Viverito Vito D'Ambrosio Will Zahrn William Rossman
Option 1 Drive.google.com 1.9 GB 1080p 6CH
Option2Megaup.net 1.9 GB 1080p 6CH
Option3Mega.nz 1.9 GB 1080p 6CH
Option4Onedrive.live.com 1.9 GB 1080p 6CH
Option5Mshare.io 1.9 GB 1080p 6CH
Option6Usersdrive.com 1.9 GB 1080p 6CH
Perfume: The Story ofaMurderer (2006) 2006
Mind and Machine (2017) 2017
Vehicle 19 (2013) 2013